KUKHUZWA umsangano osusabalele ezinkundleni zokuxhumana mayelana nosawoti noviniga
BONGIWE ZUMA | June 6, 2020
KUSUKELA ngempelasonto kuyachwaza ezinkundleni zokuxhumana ikakhulukazi kuFacebook, abantu bekhuluma ngamandla kasawoti novinegar okuthiwa wenza abantu baboniswe izitha zabo.
Kuvele ukuthi abantu bafaka usawoti novinegar omnyama bese bekufaka phansi kombhede ukuze baphuphe sakuboniswa phakathi namabili.
Lokhu kuqubule omkhulu umsindo emakhasini ahlukene akuFcebook kanjalo nakuTwitter. Babodwa abathi babona abanakwabo, abathakathi, izilwane nokungacaci ukuthi kuyiqiniso kangakanani.
Ongoti bamakhambi esintu bathi lona umkhuba ongajwayelekile kodwa futhi engeke baphikisana nawo kubantu abawaziyo.
UMnuz V V O MKhize uthe akakaze ezwe ngalo mkhuba kodwa angaqwashisa abantu ngobungozi bokusebenzisa into abangakaze bezwe nabo ngayo. UMkhize uthe ngokujwayelekile uma umuntu eba nesibonakaliso sikhuluma ngaye kuqala nento eqondene nayo nekumele ayilungise.
Lokhu okunye kwabathakathi nezilwane kuba yinto engalandela kamuva uma kwenzile kwavela.
"Kumele kuqale kumbuleleke wena kuqala, akumele isithupha sikhombe omunye umuntu singabhekisi ngakuwe. Iphutha elenzekayo esikhathini abantu benezinkinga babona sengathi zidalwa abanye abantu kugcine sekulula ukuthi umuntu uyathakatha," kusho uMkhize.
Eqhuba uthe abantu basebenza ngezindlela ezingafani nezindawo zinenqubo engafani nokwenza lo mkhuba abantu abaningi bangawazi.
"Kuningi abantu okumele bakuqaphele, into eyenziwa bese ihambisana nokusebenza komqondo womuntu ingadala nezinkinga. Yingakho kungcono umuntu aqale athole ulwazi olwanele ngento angenzi into ngoba yenziwa iningi," kusho uMkhize.
Amavideo nezithombe sekusabalele izinkundla zokuxhumana kukhulunywa ngalo mkhuba. Babodwa abakhala ngamalungu omzimba asale etubekile emuva kokuthi benze lo mkhuba.